Nanohana be an-dRa-Tin na tamin’ny fihirana, fiantsehatra eny ara-pitaovana zavamaneno (angorodao sy gitara) i Rossy. Nankasitra ny zava-bitan’i Ra-Tin sy ny firaisankinan'i Fianarantsoa nanohana azy ihany koa ny Governoran’i Matsiatra Ambony tamin'izao fandresena azony izao.
Ankoatra ireo fanomezana samihafa azon’ny mpandresy avy amin’ireo mpanohana ny fifaninanana dia loka lehibe ho azy efatra mianadahy mpandresy tamin’ity andiany 2019 ity ireo ny fitsidihana ny tanànan’i Addis Abeba, renivohitr’i Ethiopia, miaraka amin’ny kaompania Ethiopian Airlines sy ny TV Plus mpikarakara.
Niara-nitsangana nanokana iray minitra fahanginana ny tato amin’ny Coliseum, ho an’i Fafah Mahaleo izay nodimandry tamin’ity alahady 20 oktobra 2019, andro famaranana ny fifaninanana nokarakarain’ny TV Plus Madagascar. Niara-nihira ny « Ise kely » ihany koa, taorian’ny fizarana loka sady famaranana ny seho teto Antsonjombe ho fanaovam-beloma an’i Fafah Mahaleo.